Shona language Canada yakashandisa yakaisvonaka yakaita eplate ipumburu yekuumba mhizha wemagetsi
Aluminiro rusvingo uye denga repafisi pepa rine mavara akanaka uye akajeka. Iyo yakawanda inoshandiswa mumunda, fekitari, nzvimbo, hotera, mafirimu hall, vacationland, mapurisa ekare uye villa yemazuva ano.
Aluminiyamu rusvingo uye denga repanepa rakagadzirwa nemichina rinotengesa kumativi ose enyika seGuena, Pakistan, India, Tusnia, Georgia. Vanoda rusvingo rwealuminium nedenga reimba padenga reimba.
Kazhinji Aluminium rusvingo uye denga repane pepa risati rasveta chidimbu chiri 1000mm, zvinhu zvinoshandiswa zvakagadziriswa mashizha epurasitiki PPGI. Uye mushure mokunge rugwaro ruchiumba upamhi hwakawanda huri 840mm.
Yese yakakwana yeAluminium rusvingo uye denga remapuraneti rinogadzira mutsara wemichina rinosanganisira decoiler, makumbwe ekugadzira, kombiyuta yekutarisa, kuvhara kwekombiyuta uye kubuda patafura.